Iikati General Info | Isilimela 2022
Ikati enkulu kunazo zonke emhlabeni
Udidi Iikati General Info
Ngokuqinisekileyo iikati ezityebileyo zithatha ingqalelo. Jonga iirekhodi ezibambe irekhodi lehlabathi ukusuka kwixesha elidlulileyo, kunye neecrafers ezimbalwa, kwaye ufumane ukuba zeziphi iintlobo ezinkulu.
Kutheni ikati yam iFikelela kwiPaw yakhe?
Enye yeendlela zokuziphatha ezithandekayo ezenziwa ziikati kukufikelela kwi-paw yabo kubahlobo babo abangabantu kubenza bazibuze, 'Kutheni ikati yam ifikelela ...
Ziphi iindawo ezigqibeleleyo zokuthenga ikati?
Xa sele ukulungele ukwamkela isilwanyana esitsha, kubalulekile ukwenza uphando lwakho kweyona ndawo intle yokuthenga ikati. Ukusuka kumakhaya okondla izilwanyana kunye nokuhlangula kubazalisi kunye ...
Ungazigcina njani iikati kwikhawuntari yakho yasekhitshini
Nabani na onekati ekhayeni lakhe uqhelene nomnqweno wesifazana wokufikelela kwiitafile zakho zasekhitshini. Ukuba uyazibuza ukuba zingagcinwa njani iikati kwiikhawuntari, ...
I-106 eyaMnyama eyaMnyama kunye neMhlophe okanye Amagama eKati eTuxedo
Ukuthiya ikati lakho elitsha okanye ikati yenye yezona zinto zibalaseleyo ngokumzisa ekhaya. Ukuba uyikati ye-tuxedo okanye unemigca okanye amabala amnyama namhlophe, jonga ...
Ungenza ntoni xa ufumana ikati elahlekileyo
Indawo ezilahlekileyo zikho kuyo yonke indawo kwaye zihlala zifuna uncedo. Jonga iingcebiso malunga nokuba ungazixelela njani izilwanyana zasekhaya ezilahlekileyo, ukubafumana njani abanini bekati, kunye nento onokuyenza ukuba awukwazi.
Iindlela ezi-8 zokugcina iikati ngaphandle kwebhokisi yesanti
Ukuba nebhokisi yesanti kwiyadi yakho yangasemva kunokuba yinto emnandi kubantwana abancinci, kodwa kunokuba ngumceli mngeni ekufumaneni indlela yokugcina iikati kwiibhokisi zesanti. ...
Iimpawu ezibonisa ukuba ikati yam iyadlala okanye iyalwa
Ukubukela iikati ezidlala kunye kunye nokulwa kungathandeka ngokwenene. Nangona kunjalo, ukuba awuqhelanga indlela yokuziphatha kwekati, kunokwenzeka ukuba uphoswe ...
Ixabisa malini iikati zeRagdoll?
Ixabiso lekati yeRagdoll linokukunika ukothuka. Fumanisa ukuba ungalindela ukuhlawula malini, izinto ezichaphazela kwiindleko, kunye nengcebiso malunga nokuthenga.
Iingcebiso ezifanelekileyo zokuSusa ikati eDander
Ngaba ukhathele kukufumana loo maqebengwana amhlophe amdaka kuyo yonke ikati yakho? Fumana ezi ngcebiso zomlilo ngokuqinisekileyo zokubasusa.
Ngaba ikati kamama ilahlekile iikati zayo?
Amantshontsho anamakhaya amatsha, kwaye ngoku ikati yomama iyakhala. Unokucinga ukuba uyabakhumbula abantwana bakhe, kodwa ufumane esona sizathu sokuba aqhubeke.
Iikati ezi-5 zokulunywa ziimpawu zosulelo akufuneki uzihoye
Ukulunywa kwekati kufuneka kuthathwe nzulu kwaye kunyangwe ngokukhawuleza. Jonga olu luhlu lweempawu ezinokuthetha ukuba uphuhlisa usulelo.
Ngequbuliso uKati onothando
Ikati yakho eqhelekileyo yokuma ngoku icinga ukuba uliziko lendalo iphela. Fumanisa ukuba kufanelekile na ukuba ubenexhala malunga nothando olukhawulezileyo lothando.
Iintsomi kunye neNyaniso malunga neekati zeCalico zamadoda
Ama-calicos angamadoda ayimfihlakalo. Fumanisa ukuba kutheni ezi kati zinqabile, yintoni eyenza ukuba ufuzo lwahluke kangaka, kwaye zichaphazela njani amandla azo okuzala.
Kutheni iikati zisitya iplastiki? Iinyani kunye noThintelo
Enye indlela yokuziphatha abanini beekati abayifumanisa ingaqhelekanga kukutsala kwabo ngeengxowa zeplastiki. Ezinye iikati zithanda ukuziqengqeleka zize zizixakeke, ngelixa ...
Ukufumana ikati yaseSiberia yokuhlangula
Ukusweleka ukwamkela ikati yaseSiberia? Izinketho zakho zikhawulelwe. Funda malunga neendawo ezintathu zokufumana enye kunye nendlela yokuthintela ukukhutshwa kukuhlangulwa okuyinyani.
Izizathu ezili-12 zeekati eziLethargic
I-Lethargy luphawu oluqhelekileyo lwezifo ezininzi zesifo. Ukuba ikati yakho yenza ukonqena, kuya kufuneka ujonge ezi zinto zibangela kunye nonyango lwabo.
Ngaba ndifanele ndifumane ikati eliDuna okanye eliSetyhini?
Ukukhetha uhlobo lwekati olusebenzela indlela yakho yokuphila kufuna ingcinga ethile, kodwa abanini abanokuba nekati bahlala bengayithathi into yokuba ikati yesini ibalulekile njenge ...
189+ Amagama obuGcisa beekati eziMnyama
Sukuyinika ikati yakho emnyama naliphi na igama elidala. Ukusuka kwimveli ukuya kwinto engaqhelekanga ukuya kwinkcubeko kunye nabantu abadumileyo, fumana izimvo zamagama ongazange wacinga ngazo ngaphambili.
Ukukhetha ukuhlalutya ikati
Ukujongana nokuphela kobomi bekati ethandekayo akukho lula. Fumana iingcebiso eziza kukunceda uthathe isigqibo xa ilixesha lokuba uyeke kwaye ubonakalise ubuntu.
iindlebe zenja vs i-wax yendlebe
unxibe ntoni kwinkonzo yesikhumbuzo
useta njani ixesha ekubukeni i-casio ngamaqhosha amane
ukuphuma kwefenitshala yokuthengisa ishishini
ingaba injani icikilishe ijongeka kanjani
Ngaphezulu Size Slideshows